Wmv in DVD Mac / Windows - Beddelaan wmv in DVD cajalid (Windows 8 ka mid ah)
Wmv waa qaab arrin caan ah multimedia ee ay Microsoft. Waxaa laga yaabaa in a collection of wmv filimada cabsi badan ku kaydsan computer, ama sameeyey Windows Movie abuuray. Ma doonaysaa in loogu badalo wmv in DVD si ay u raaxaystaan ​​ciyaaryahanka DVD ama TV shaashad ballaaran? Haddii aad isku daynay, waxaad ka heli doontaa in Windows Movie Kan sameeyey oo keliya kuu ogolaanaysaa inaad gubi video inay CD. Si kastaba ha ahaatee, wax ka heli doono hawl yar, haddii aad qaban adag oo si sahlan loo isticmaali wmv in DVD gubi.
Bilaabo Free wmv in DVD Converter for Windows (Mountain Libaaxa & Mavericks)
Windows DVD Kan sameeyey (Windows)
Iyada oo ay taasi qalab DVD qaadashada lacag la'aan ah, waxaad si fudud u gubi kara wmv in DVD si uu u daawado kombiyuutarka ama TV la DVD ciyaaryahan aad. Just dari sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow in DVD gubi xorta ah, ka dibna aad si deg deg ah ayaa gubi kara DVD ah. Haddii aad rabto in aad DVD ah oo khibrad leh, aad edit karaa qaab DVD menu iyo qoraalka ka hor inta aadan gubi DVD ah.
Iyadoo si fudud ah si ay u isticmaalaan interface, StartBurn waa mid aad u saaxiibka nala ah inay dadka isticmaala aan lahayn aqoon ololaya video. Waxa ay taageertaa dhammaan noocyada files DVD / VCD warbaahinta si ay u abuuraan bandhiga Video DVD nooc kasta oo ah qoraa DVD Player ama. Kaliya Waxaad raaci kartaa fariimaha ku-screen si loo soo dajiyo wmv ah si xor ah u DVD gubi oo wuxuu ku raaxaysan aad waayo-aragnimo DVD loo maqli karo.
Tani qalab DVD gubashadii free waa wmv free weyn oo ay ku DVD Converter. Sidoo kale waxa ay taageertaa diinta videos in AVI, MP4, wmv, MKV, 3GP, DVD, MP3, iPad, iPhone, PSP iyo telefoonada Android. Waxa ugu weyn waa in ay sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa videos (cut, ku biiraan iyo isku shaandheyn, iwm), ka dhigi duubey la sawiro iyo music, iyo taageero qaab ballaaran.
Hel wmv Professional & xoogbadane ay u DVD gubi
Dhammaan kor ku xusan waxaa ka mid ah gubidda DVD oo lacag la'aan ah. Haddii aad rabto in aad masterpiece xirfadle DVD, aad si fiican isku dayi lahaa Wondershare DVD Creator ( DVD Creator for Mac ). Waxaa leeyahay faa'iidooyinka soo socda in ka badan kuwa kale ee DVD.
• Professional DVD gubi: Gubashada kasta video in disc DVD, DVD folder iyo files ISO qeexidda sare.
• Foomamka DVD Great Menu: Bixiya badan 40 arrimo menu + DVD.
• Xoog Function Video ayeey: Edit videos, photos, music, DVD iyo arrimo menu la muujinta tafatirka sare.
• Samee Photo Muqaal: qas video, music la sawiro aad si aad slideshow photo la doonayo.
Talaabooyinka Easy si loogu badalo wmv in qaab DVD
Ka dib markii download iyo rakibi DVD Creator , waxaa lagu daahfuri oo guji "Import" in ay ku shuban aad isha wmv videos. Waxaad kale oo jiidi karaan iyo hoos u xushay files wmv in uu furmo suuqa hoose si toos ah. Ka dib marka aad ku darto oo dhan oo iyaga ka mid, waa inaad ku labanlaabtaa karaa guji video clip si ay u eegaan wax on suuqa kala xaq u arkaysid ah.
2 Edit wmv videos (optional)
Wmv in DVD Converter ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah hawlaha tafatirka caadiga ah si kor loogu qaado files wmv aad si fudud oo dhaqso. Riix icon qalin sokow video kasta horyaalka, waxa aad heli kartaa suuqa kala edit ah. Halkan, waxaad samayn kartaa itusi sida beerista, falinjeeerka, qoqobada, isagoo intaa ku daray watermark, isagoo intaa ku daray saamaynta, iyo wixii la mid ah.
By jidkii, DVD menu waa mid wax tar leh in uu abaabulo wmv videos on DVD disc haddii ay jiraan in badan oo wmv videos. In "Menu" tab, waxaa jira arrimo badan oo lacag la'aan ah dhisay-in, loox iyo badhamada Doorashadaada. Ka dib markii ay doortaan template menu ah, waxaad bedeli kartaa background image, ku dar qoraalka iyo music, ama qoraaga jir ah iyo badhanka si ay u shakhsiga.
3 Guba wmv in DVD (Windows 10 ka mid ah)
Ka dib oo dhan badalaad lagama maarmaan ah, waxaad tagi kartaa "Kulanka Xiisaha Leh" tab in eegno aad DVD wmv disc. Haddii wax loo baahan yahay in wax laga beddelo, u tag oo u dhiganta tab. Marka aad ku qanacsan tahay Xiisaha Leh, guji "Guba" in la sameeyo DVD goobaha sida uu qoraalku disc, bartilmaameedka wax soo saarka, heerka TV, muuqa iyo DVD drive. Ugu dambayn, ku dhacay button gubatay, oo markaas barnaamijka si toos ah loogu badalo doonaa wmv in DVD.
Marka DVD gubashadii dhamaato, u disc wmv DVD si toos ah saaray doonaa, si aad si toos ah u geli karaa ciyaaryahan DVD caadiga ah si aad u daawato wmv videos on TV. Cool? Samee naftaada hadda.
Free download Wondershare wmv in DVD gubi:
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan wmv in DVD ee Mac iyo Win (Windows 10 ka mid ah)